Qurbajoogta Puntland oo walaac ka muujiyey is-maandhaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan Puntland & federaalka. – Radio Daljir
Qurbajoogta Puntland oo walaac ka muujiyey is-maandhaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan Puntland & federaalka.
Puntland, Nov 21 –
Tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dawladda Federalka Soomaaliya waxaa isi soo tarayey hadal haynta ku aaddan falan qaynta amuurtaas.
Waxaana siyaabo kala duwan aragtiyo uga dhiibay bulshada Soomaaaliyeed ee daneeya siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaanna deeggaannada Puntland is afgara waa gaasi wuxuu ka noqday midka loogu hadal hayn badan yahay.
Markii ii khilaafkaasi oo ifbaxay oo ahayd todobaadkii hore xilligaasi oo labada m/weyne ay kulan ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa uu madaxweynaha Puntland uu sheegay mas?uuliyiin federalka in ay ka caga jiidayaan hormarinta Puntland oo halka ugu xasiloon Soomaaliya xilligaan hase ahaatee m/weyne sharriif ayaa isna dhankiisa shalay sheegay khilaafku in uu yahay mid sahlan isla markaana la dhammayn karo.
Siyaasiyiin Puntland ka sokow shacab reer Puntalaand waxay aaminsanyihiin dano badan oo uu quseeya Puntland dawladda federalku in aysan ogalayn cagajiidna ay ma muujiyo waxkasta oo hormar u keeni kara dalka iyo dadka reer Puntland xataa haddii dib loo milicsado khilaafyayadii hore oo soo kala dhaxgali jiray Puntland iyo dawladda federalka
Siyaasiyiin aqoonyahan, saladiin dhaqan oo ree Puntland ah kuna sugan dalka iyo dibadda ayaa aragtiyo midansan ma muujiyey khilaafka iyo xalkiisa iyo waliba Puntland iyo waxa la gudboon.
Cabdi Qafaar Maxamed Guure wuxuu ka mid yahay qurba joogta reer Puntland eek u nool dalka dibaddiisa gaar ahaan wadanka ingiriiska wuxuunaa xiriir uu la soo sameeyey idaacadda Daljir uga hadlay aragtidiisa ku aaddan waxyaabaha haatan socda gaar ahaan khilaafka labada m/weyne Puntland iyo xilligaan waxa la gudboon, dawrka hormarinneed eequrbajoogta Puntland
Waxaana mar ugu horraysa aan weydiiyey wax xiriirka uu nala soo sameeyey ku saabsan yahay.